Uhlobo lwee-80s: ukusetyenziswa, iimpawu kunye nemizekelo emihle | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | 16/05/2022 17:00 | Idizayini yeMifanekiso, ngokubanzi
I-80 yayiyiminyaka elishumi egcwele iimpahla zakudala kunye noyilo oluninzi lwe-retro. Ishumi leminyaka elingasayi kubuya kodwa nangona kunjalo, ifashoni yangoku kunye noyilo luye lwadibana ukuze lubuyele kuloo minyaka yemibala eqaqambileyo kunye nobomi obuninzi.
Kodwa asifuni ukuthetha nawe malunga nefashoni ngeli xesha, kodwa malunga nenye yezona zinto zisetyenziswa kakhulu kuyilo lwegraphic, ukuchwetheza. Ngoko Sikuphathele icandelo apho siza kubonisa ezinye zezona fonti zibalaseleyo ze-retro ze-80s, ukuze ukwazi ukuyila iiprojekthi zakho njengeediliya kangangoko kunokwenzeka.
Ukongeza, siza kuchaza ezinye zeempawu zolu yilo lochwethezo.
1 Uhlobo lwee-80s: Uyilo kunye neempawu
2 Imizekelo yeefonti ukusuka kwi-80s
2.5 I-Lazer 84
Uhlobo lwee-80s: Uyilo kunye neempawu
Iintlobo zochwethezo ze-80s, ezaziwa ngokuba zii-typefaces ze-retro, zizitayile zeefonti ezazinempembelelo kakhulu ngeminyaka yoo-80s kunye nexesha esilazi njengelokudala. Ziifonti ezicacisa kakhulu, ziphinde zatshajwa ngemibala emangalisayo neyahlukeneyo. Ke ukuba umlinganiswa uyathetha ngabo, kuyaqondwa ukuba bangoonobumba ababonisa umlinganiswa odlamkileyo nochwayitileyo.
Nangona abaninzi bethu bengayikholelwa, ezi ntlobo zochwethezo zikhatshwa kwimbali yonke, kwiimpawu ezininzi kwaye baye baba ngabalinganiswa beendawo ezininzi zentengiso. Ngaphandle kwamathandabuzo, iinkcukacha ezibabonakalisa kakhulu kukuba bahlala benemilo ekhululekileyo kwaye ebanzi, ethanda ngakumbi ubuntu babo kunye nobuchule babo.
Ngamafutshane, nanini na sijongana nento ekudala idala okanye i-retro, ichaza ukuba ivela kwiminyaka yama-80s okanye nakwi-70s, ke zizinto ezihlala zihleli kwimbali yehlabathi, kwaye kule meko, kananjalo art.
Ngezantsi siza kukubonisa iimpawu ezilula zolu hlobo lwefonti kunye neempawu zayo kunye noyilo olulodwa.
Nangona kunjalo kuyinyani ukuba i-retro okanye i-80s typefaces inembali ende, ayinakuchazwa njengohlobo lwakudala okanye iifonti. Ihlabathi lobugcisa libanzi kwaye lide kakhulu, kodwa sithatha yonke into endala eyandulela uninzi lwezinto eziqanjiweyo esizaziyo neziyinxalenye yenkulungwane ye-XNUMX.
Ziluhlobo lwemithombo ethi nangona igcinwe iminyaka yokusetyenziswa, isasetyenziswa. Ke ziyinxalenye yoyilo lwegraphic esilwaziyo namhlanje. Enyanisweni, iibrand ezininzi zibheja ngolu hlobo loyilo loyilo lwazo.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeefonti zakudala okanye iifonti ukusuka kwi-80s, yiyo loo nto kukho uninzi loyilo esilufumana kumaphepha e-intanethi kunye Zahluke kakhulu kwaye zahlukene phakathi kwazo.
Phakathi kweempawu zayo, kwakhona sibalaselisa ukuba ziintlobo zohlobo ezikwaziyo ukutsala umdla woluntu, ngeefom zayo kunye nokucacisa kwayo. Nangona kunjalo, abanalo kuphela oku kusebenza njengereferensi yabo ephambili, kodwa bagcina ubuninzi beempawu kwiimilo zabo. Umba othe, ekuhambeni kwexesha, uye wachithakala, wade wafumana iifonti ze-retro okanye zakudala ezineenkcukacha zegraphic zanamhlanje eziqhelekileyo.
Imizekelo yeefonti ukusuka kwi-80s
Umthombo: Uyilo lweMizobo yeBadajoz
Ukuqala nje kokubona, ukuchwetheza kweRen kunokubonakala ngathi kukude kwinto esiyaziyo njengamaxesha e-retro okanye amadala. Kodwa ukuba sisebenza naye, siyabona ukuba ngaphaya kwesitayile sakhe sakudala sasentshona, ukwabonisa kuyilo lwakhe, iinguqu ezincinci eziqhelekileyo ze-80s.
Ifonti eqhekezayo onokuthi udibanise ngayo izitayile ezahlukeneyo, ngaphaya kwecala le-cowboy lentshona yakudala. Ibonakaliswe kuba iqulethe ukuya kuthi ga kwizimbo ezine ezahlukeneyo ngokupheleleyo phakathi kwazo. Ukongeza, ayipheleli nje ngokuba yenye yezona fonti zahluka kakhulu kwaye ziyilayo, kodwa inomdlalo othile kwaye inika umgangatho omkhulu kwiiprojekthi zakho.
Unayo iyafumaneka kwamanye awona maphepha angaqhelekanga e-intanethi ukukhuphela iifonti okanye iifonti zesi simbo. Ukongeza, iphinda ibonakaliswe ngokuba yifonti efanelekileyo kakhulu kwizihloko ezinkulu, eziza kwenza kube lula kuwe ukuba uyisebenzise kumajelo athile afana neepowusta, iindawo zentengiso okanye iimpawu ezinkulu. Ungathandabuzi ukuyizama, kuba yifonti engaqhelekanga kakhulu phakathi kwezo zikhoyo zine-typology efanayo.
Yiba nesibindi kwaye uzame ngezitayile zayo ezahlukeneyo kunye neendlela ezahlukeneyo.
Ifonti: Iifonti zaseCufon
Wamkelekile kwaye Wamkelekile kwihlabathi le-Art Deco. Ngaphandle kwamathandabuzo, sinikezela kuwe enye yolu hlobo lochwethezo esiluthanda sonke thina bathandi bobugcisa kunye nembali yayo, ukuvela kwayo, ukumelwa kwayo kunye neempawu zayo ezizodwa nezikhethekileyo.
IMacna yifonti ethi, xa uthi krwaqu, ikuthumele ngefowuni kwenye yezona ndlela zibalaseleyo zobugcisa kwihlabathi lobugcisa, i-Art Decó. Ifonti ethi, ngaphaya kokumela amanye amabali ahlala kwi-80s, yenza njalo nge-20s, kunye nobuntu obuya kukushiya ungathethi.
Yenye yezo ntlobo zochwethezo esihlala singayixabisi de sisebenze kuyo kwaye siyiphuhlise kuyilo lwethu. Uyilo olukhethekileyo onalo ngokucofa nje kube kanye. TSikwaqaqambisa ubuhle obukhulu obuqulunqwe ngabo, ukunika indlela kwihlabathi elizele yimbali eninzi kunye nokukhumbula amaxesha amaninzi.
Ukongeza, ukuba nobuntu bokuyila kwayo, ifanelekile kakhulu ukuba isetyenziswe kwaye imelwe kuyilo oluthile lwebrendi. Inkalo eya kukushiya ungathethi xa uyizama. Ungalibali ngayo kwaye uzise uyilo lwakho ebomini.
IGoku yenye yezo fonti zikushiya ungathethi, ngenxa yoyilo lwayo. Yifonti yakudala ukusuka kwi-80s. I-typeface ethi, xa uyijonga kuqala, ikude lee kwingqikelelo ye-vintage enomtsalane kunye nobukhulu bayo obungaqhelekanga. Kwaye ayikuko ukuba olu chwethezo aluqulunqwanga ngobungqimba obunye, kodwa lukwenza oko ngobuhle kunye nobunzulu. Umthombo wokukhanya kunye nokuphupha ngawo, ukuze ubuyele kwixesha elizele bubomi kunye nehlabathi lonke lezinto eziza kufunyanwa.
NguGoku lowo, umthombo okuthumela kwakhona kwimuvi yee-80s kwaye iyenza ngowona mlinganiswa unomtsalane. Ngaphandle kwamathandabuzo, ngumthombo ongenakuphoswa ngayo nantoni na ehlabathini. Ifonti onokuthi uyila ngayo iinkcukacha ezahlukeneyo zenkampani kunye neeprojekthi zoyilo lokuhlela. Ubuhle bayo bukwaqaqambisa ukusebenza kwayo kunye nokusetyenziswa kwayo kuyilo lwemagazini yefashoni.
Ukongeza, enye yeempawu ezimele olu hlobo lokubhala okanye ifonti, kukuba ungayisebenzisa zombini kwibhokisi ephezulu kwaye kwibhokisi ephantsi, isimangaliso soyilo.
I-Byshore yenye yezo fonti uzibonayo kwaye ikukhumbuza ngemidlalo ye-80s. Ifonti eyilwe ukusuka kwiibrushstrokes ezibetha kakhulu, ikwaphawulwa ngokucacisa kwayo, Ngale ndlela, ayiphumeli kuphela kuyilo lwayo olumangalisayo, kodwa ikwaphefumlelwe yimidlalo emininzi, iimuvi kunye nomculo welo xesha.
Ngapha koko, ayimangalisi into yokuba iye yaphefumlelwa naluyilo oluthile lwamaqweqwe omculo amaninzi ee-80. Uhlobo olulodwa lokudibanisa ukuyila kunye noyilo lwe-retro. Ungalibali ukuyizama kwaye uyikhuphele, kuba awuyi kuzisola. Ukongeza, ngokungathi oko akwanelanga, kunokwenzeka ukuba uyisebenzise kuyilo lokupakisha olunokwenzeka, ngaloo ndlela ushiya uyilo olukhethekileyo olungenako ukuphuma kwisitayile.
Kwakhona kukhankanyiwe kukuba kunokwenzeka ukuba inokukhutshelwa kwiiwebhusayithi ezininzi zefonti, apho unokuyifumana simahla.
Inqaku lokugqibela elinokongeza ngale fonti kukuba ukwanayo kuzo zombini iibhokisi ezisezantsi neziphezulu. Uyilo olukhethekileyo, loyilo olukhethekileyo kunye nezona ziphumo zoqobo kunye nezohlukileyo.
I-Lazer 84 yenye yeendlela zokuchwetheza eziphawulwa ngowona yilo lwakudala kunye noyilo lwe-retro. Ineenkcukacha ezininzi kwisakhiwo sayo kunye noyilo olulawula ukutsala umdla woluntu. Umzekelo, inothotho lwemibala eqaqambileyo ngaphakathi nangaphandle.
Inyani yokuba inezithunzi ezithambileyo zokuhla ikwangumba oxhasa uyilo lwayo. Ukongezelela, iphefumlelwe ngeepowusta ze-80s, umba othanda kakhulu ukusetyenziswa kwayo kwiipowusta, okanye uyilo lokuhlela ngokunjalo.
Ukuchwetheza kukwabonakaliswa ngokuqulatha abalinganiswa bazo zonke iintlobo, ukusuka koonobumba abakwimeko ephezulu kunye nencinci, ukuya kumanani kunye nabalinganiswa abakhethekileyo. Ngesi sizathu, yifonti enoyilo olukhethekileyo nolwahluke kakhulu, apho, ngaphandle kwamathandabuzo, akufuneki uphoswe.
Iintlobo zochwethezo zeRetro azikaze ziphume kwisitayile, le yinyani engqinwe amashumi eminyaka. Ngesi sizathu, siye sayila uluhlu olunezinye iifonti esinethemba lokuba ziya kukunceda kwiiprojekthi zakho ezilandelayo.
Sikwanethemba lokuba ufunde okungakumbi malunga nolu hlobo loyilo lwefonti.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iifonti ze-80s